Turkiga oo duqeeyey xarumo kurdiyiinta ay ku lahaayeen Syria | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Turkiga oo duqeeyey xarumo kurdiyiinta ay ku lahaayeen Syria
Turkiga oo duqeeyey xarumo kurdiyiinta ay ku lahaayeen Syria
Diyaaradaha Dagaalka e Wadanka Turkiga ayaa duqeymo dhanka cirka ah ku qaaday bartilmaameedyo maleeshiyaadka kurdiyiintu ay ku leeyihiin woqooyiga dalka Suuriya.
Saraakiisha Ciidamada Militariga Dalkaasi Turkiga ayaa sheegay in dhawr diyaaradood oo kuwa dagaalka ah ay weerar ku qaadeen maleeshiyaadka Kurdiyiinta Suuriya ee halkaasi ku sugan,kuwaasi oo Turkiga uu u arko halis dhanka amniga ah ee Dalkiisa.
Warbaahinta dowladda Turkiga ayaa sheegeysa in maleeshiyaad reer Suuriya ah oo uu Turkigu taageero ay guluf dhanka dhulka ka billaabeen gobolka Afrin oo uu maamulo isbahaysiga SDF ee uu Mareykanka taageero,taasina waxaa ay muujinaysaa heerka uu taagan yahay khilaafka Mareykanka iyo Turkiga ee Qadiyadda Syria.
Dhanka kale war ka soo baxay Wasaaradda arrimaha dibadda Ruushka ayaa walaac ka muujisay hawlgalka Turkiga waxa ayna ku baaqday in xiisadda la dejiyo,Turkiga iyo Ruushka ayaa u muuqda in ay isku xulufo ay yihiin marka loo fiiriyo siyaasadda Mareykanka eek u wajahan Syria.
Madaxweynaha Dalka Turkiga Mr Ordugan ayaa horey u ballan qaaday in uu la dagaallami doono ciidamo Kurdiyiin u badan oo Mareykanka uu ka abaabulayay gobolkaasi Afrin ee xudduudda Turkiga la wadaago Suuriya,kadib markii Turkigu uu u arkay in ay yihiin kuwo amnigooda khatar ku ah.